အချိန်ဆိုတာပြန်ပြီး အစားထိုးမရနိုင်တာကြောင့် အားလပ်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဆို အချိန်ကုန်တာချင်းအတူတူ ပိုပြီးအကျိုးရှိအောင်ဘာတွေလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်လဲ? လွယ်ပါတယ်။ အားနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ဖုန်းသုံးရင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ဂိမ်းဆော့ရင်းဖြစ်ဖြစ် ကုန်ဆုံးလိုက်တာက တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် ကောင်းပေမယ့် တခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ဆိုးကျိုးတွေရှိနေပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်ဆောင်တဲ့ အရာတိုင်းက ကိုယ့်အတွက် အသိပညာတစ်ခုတိုးခြင်း၊ အမြင်တွေတိုးတက်လာခြင်းတွေက ကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့ အချိန်တွေကို တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချလိုက်ခြင်းပါပဲ။ အလုပ်နားရက်တွေ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ အားလပ်ရက်တွေမှာ စာလေ့လာချင်ပေမယ့် သင်တန်းတွေသွားမတတ်နိုင်လို့ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။
Internet ရှိရုံနဲ့ Online ကနေ သင်တန်းတွေတက်လို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တက်ချင်တဲ့ သင်တန်းအတွက် ကုန်ကျဖို့ ငွေကြေးမရှိဘူးဆိုရင်လည်း Free တက်လို့ရတဲ့ သင်တန်းတွေရှိနေပါတယ်။ ဒေါ်လာ (၄၀) ကနေ (၈၀) ကြားရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသင်တန်းတွေကို Free တက်လို့ရမယ့် အခွင့်အရေးတွေက သင့်ကိုစောင့်ကြိုနေပါတယ်။
အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိ အသုံးချချင်တဲ့ သူတွေအတွက် Coursera Platform မှာ ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်မှရတဲ့ Course တွေကို Enroll ရင် Free အပြင် Certificate ပါရမယ့် သင်တန်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက Free ပေးတဲ့ကာလက ဇွန်လကုန်ထိမို့လို့ မြန်မြန် Register လုပ်ထားဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential2from McMaster University
A Life of Happiness and Fulfillment 1 from Indian School of Business
De-Mystifying Mindfulness 1 from Leiden University
Psychological First Aid 1 from Johns Hopkins University
Chinese for Beginners 1 from Peking University
First Step Korean 1 from Yonsei University
Becomingachangemaker: Introduction to Social Innovation 1 from University of Cape Town
Introductory Human Physiology2from Duke University
Positive Psychology 1 from The University of North Carolina at Chapel Hill
Epidemiology: The Basic Science of Public Health 1 from The University of North Carolina at Chapel Hill
The Science of Success: What Researchers Know that You Should Know 1 from University of Michigan
Dog Emotion and Cognition 1 from Duke University
Sharpened Visions: A Poetry Workshop 1 from California Institute of the Arts
Sit Less, Get Active 1 from University of Edinburgh
Introduction to Personal Branding 1 from University of Virginia
Personal & Family Financial Planning 1 from University of Florida
How to WriteaResume (Project-Centered Course) 1 from State University of New York
Code Yourself! An Introduction to Programming 1 from University of Edinburgh
ကိုယ်တက်ချင်တဲ့ သင်တန်းတွေကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ချင်ရင်တော့...